DEG DEG: Fahad Yaasiin oo bayaan gaar ah kasoo saaray go’aankii Maxkamadda Sare ee kiiskiisa | Hadalsame Media
Home Wararka DEG DEG: Fahad Yaasiin oo bayaan gaar ah kasoo saaray go’aankii Maxkamadda...
DEG DEG: Fahad Yaasiin oo bayaan gaar ah kasoo saaray go’aankii Maxkamadda Sare ee kiiskiisa
(Muqdisho) 20 Abriil 2022 – Fahad Yaasiin ayaa soo saaray qaraar uu ku aqbalayo go’aankii Maxkamadda Sare ee ahaa inaysan qaadi karin dacwaddiisa.
“Markii aan si qoto dheer uga baaraandagay qaraarka ay soo saareen Garsoorayaasha waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaago inaan ixtiraamayo qaraarla ka soo baxay Maxkamadda Sare oo ah Hey’adda ugu sareysa ee garsoorka dalka.” Ayuu qoraalkiisa ku yiri Fahad oo aqbalay diidmada Maxkamadda.
Maxkamadda Sare ee Somalia ayaa maanta iska diiddey inay go’aamiso kiiska kursiga Fahad Yaasin ee dhowaantan la gaarsiiyey.
Maxkamadda ayaa tillaabadan u cuskatay inaysan awood garsoor u lahayn go’aaminta dacwaddan, maadaama ay salka la geleyso xeer jajab siyaasi ah oo aah xeer toos ah ku dhisnayn iyadoo gebi ahaanba xirtey gal-dacwadeedka Kursiga Fahad.
Sidaa darteed, maadaama ay dadban tahay doorashada Somalia Maxkamadda Sare awood sharci ah uma laha inay wax ka qabato dacwooyinka maamul iyo kuwa hab-raac ee kuraasida Baarlamanka 11-aad ee dalka, sida ay Maxkamaddu ku doodday.
Previous article“Ciidamada Shiinaha ayaa gantaallo ku garaacay bartilmaameedyo u dhow Taipei” – TV ku yaalla Taiwan
Next articleShiinaha oo tijaabiyey gantaal guuxiisa ka dheereeya oo uusan Maraykanku haysan (Daawo)